[တရားဝင်] dr.fone - iOS ကိုဖုန်းများအတွက်အပေါ် Kik ချတ်များ Restore & အလွယ်တကူ Backup ကို
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Kik Backup ကို & Restore
သင့်ရဲ့ Kik ချတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ backup တစ်ခု Create
Backup ကိုသင့်ရဲ့ Kik ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်အတူသမိုင်း chat ။
သင်လိုချင်တာကိုသာဒေတာ Restore ။
ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းများအတွက် backup လုပ်ထားထံမှမည်သည့်ပစ္စည်းကိုတင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
လုံးဝလုံခြုံမရှိ data ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ငါငါ့အလိုရှိသမျှ Kik ချတ်, မကြာသေးခင်ကသူမြားကိုသာသိမ်းထားချင်!
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို Kik Backup ကို & restore သင်တို့သည်နောက်န့်သတ်ချက်နှင့်အတူမည်သည့်အချိန်တွင်အားလုံးသင့်ရဲ့ Kik ချတ်ဖတ်ပါကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်အလိုရှိလျှင်သင် backup လုပ်ထားသင့်ရဲ့ Kik သမိုင်းနေ့စဉ် chat လို့ရပါတယ်။ restore ပြန်မီ, သငျသညျရွေးချယ်သည့် backup ဖိုင်ကို preview နိုင်ပါတယ်နှင့် iOS device ကိုမှနျ backup လုပ်ထား restore ။ လူတိုင်းမျှချွေးကလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Backup ကို Kik သငျသညျကို iPhone, iPad ပေါ်တွင်စကားပြောခန်း, သို့မဟုတ်ကွန်ပြူတာ
ဒါဟာ program ကို run နေနှင့်သင့် device ကိုချိတ်ဆက်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ ထို့နောက်ရုံစတင်ရန်တစ်ချိန်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကြွင်းသောအရာအလိုအလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။
စာသားနဲ့ attachment များကိုနှစ်ဦးစလုံးတက်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြသည်။
1 ကိုနှိပ်ပါ wiht တစ် Kik Backup ကို Make
သင်ဤ Kik backup လုပ်ထားသုံးပါနှင့်သင့် Kik အလွယ်တကူတက်ကျောထောက်နောက်ခံရဖို့ program ကို restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
Kik ၏ preview Backup ကို
သငျသညျ Kik backup ကိုအပေါငျးတို့သကျမ်းများနှင့် attachment များကို preview နိုင်ပါတယ်။
ပြင်သာပြောင်းသာ Kik Backup ကို Restore
preview ကိုပွီးနောကျ, သင် Kik backup လုပ်ထားမှသင်၏ iPhone, iPad ရန်သင့်အားလိုချင်တာတွေ restore ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပုံနှိပ်သင့် Kik အကြောင်းအရာတင်ပို့
သင်သည်သင်၏ Kik အကြောင်းအရာ print ထုတ်ချင်တဲ့အခါ, သင်ရွေးချယ်ပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုက HTML ဖိုင်အဖြစ် backup ထဲကအကြောင်းအရာတင်ပို့နိုင်ပါတယ်။
ဤသည် Kik backup လုပ်ထားနှင့်အစီအစဉ်ကို restore လုံးဝကိုဖတ်ရှုသာဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်ဒါမှမဟုတ် backup ဖိုင်ကိုအတွက်မဆိုဒေတာ, စောင့်ရှောက်ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကို ယူ. အလေးအနက်ထားအကောင့်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲပြုလုပ်ရယူနိုင်သူကိုသာလူတစ်ဦးပါပဲ။
Kik backup ဖိုင်ကို Restore
သင်သည်သင်၏ iPhone, iPad ဖိုင်များကို restore နိုငျသညျ, သို့မဟုတျသငျတစ်ခုက HTML ဖိုင်အဖြစ် backup လုပ်ထားမှသင်၏ကွန်ပျူတာမှအကြောင်းအရာများတင်ပို့ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်းသင်ပထမဦးဆုံးဖိုင်တွေကို preview နိုင်ပါတယ်။
ထိပ်တန်း 10 အခမဲ့အကောင်းဆုံး Kik Chat ကိုအခန်းနှင့် Kik Chat ကိုအဖွဲ့များ
Hot နှင့် Sexy Kik မိန်းကလေးများအသုံးပြုသူအမည်ကိုရှာပါ3နည်းလမ်းများ
အားဖျက်သိမ်းပြီး Kik မက်ဆေ့ခ်ျများ Recover လုပ်နည်း
iPhone မှ Kik မက်ဆေ့ခ်ျများ Restore လုပ်နည်း
Kik Backup ကို - ဘယ်လိုမှ Backup ကို Kik မက်ဆေ့ခ်ျများ
iPhone ပေါ်မှာဟောငျး Kik မက်ဆေ့ခ်ျသို့ပြန်သွားရန် Get လုပ်နည်း
iPhone ကို မှစ. အားဖျက်သိမ်းပြီး Kik ဓါတ်ပုံများ Recover လုပ်နည်း
ဟောငျး Kik မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ပါလုပ်နည်း
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချတ်နှင့်အုပ်စုချတ်အပါအဝင်လွယ်ကူစွာ backup လုပ်ထားသင့်ရဲ့ LINE Chat history ကို, စာသား, အသံနဲ့ video chat သမိုင်း; ပုံရိပ်တွေနှင့်စတစ်ကာများ, etc